Aamina: “Gabar dhex degeneed meel aan geli karin Aniga oo Xildhibaan ah in si fudud lagu waayo waa xaqiiqo la iska indha-tiraayo”. | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Aamina: “Gabar dhex degeneed meel aan geli karin Aniga oo Xildhibaan ah...
Aamina: “Gabar dhex degeneed meel aan geli karin Aniga oo Xildhibaan ah in si fudud lagu waayo waa xaqiiqo la iska indha-tiraayo”.
Xildhibaanad Aamina Maxamad Cabdi oo la hadashay TV-ga Universal ayaa ka hadashay kiiska ku saabsan Ikraan Dr Tahriil Faarax ayaa xaqiiqo indhaha laga iska tiraayo ku sheegtay arrinta Gabadhaan maadaama goobta lagu waayay ay joogaan Ciidanka NISA.
Aamina ayaa howlaha ay Dowladda ka dhex qabatay Ikraan ku tilmaamtay kuwo Muhiim ah sida la shaqeynta Duqa Caasimadda & Hay’adda Nabadsugidda iyo sirdoonka Qaranka balse haatan nolol & Geeri toona aan lagu heyn.
“Ikraan waa Gabar dhex degeneed meel aan geli Karin aniga oo ah Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka waa nasiib darro in si fudud lagu waayo balse waxa aan ku tilmaami karaa xaqiiqo la iska indha-tirayo” sidaasi waxaa yiri Xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi.
Waa ay sii hadashay Xildhibaanad Aamina waxa ay dalbatay in laga run sheego xaaladda dhabta ah ee Inantaan la waayay 26-kii June 2021 xili ay mareysay inta u dhexaysa hotelka Globol iyo KM0 (Kilometer Zero) oo ah goob u xiran Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya.
“Haddii meeshii loosoo cararay ay dhibaatadu ka jirto waxa ay noqoneysaa in Dowladdii aan lagu kalsoonaan laga aamin baxo oo qof isku aaminaayo aanay jirin, Gabar kasta & wiil kasta oo Nabadsugidda u shaqeeyanaya Ikraan meeshii ay martay ayuu marayaa haddii arrinta la tuhunsan yahay run noqoto” ayay sii raacisay Xildhibaan Aamina.
Waxa ay muujisay in loo hayo Caddeymo muujinaya in dhanka Nabadsugidda ay jirto “Wax waliba meesheeda ayay ku habboon tahay Maxkamadaha & Baarista marka la tago, Ninkii gaariga ku qaaday ayaa la yaqaanaa oo darawalka Taliyaha Nabadsugidda Gobolka Banaadir, Nabadsugiddu waxa ay sheegtay in ay baareyso balse waxaa la rabay in haddii ay baarayaan in ay wiilkaas soo qabtaan, xiraan isaga la weydiiyo” waa sida ay tiri Xildhibaan Aamina.
Previous articleKhilaaf saameyn xun yeeshay oo ka dhex-taagan talisyada ciidanka xoogga iyo Amisom
Next articleDaawo Real Madrid Oo Garaacday Barcelona, Ronaldinho & Halyeeyo Kale Ayaa Iska Hor Yimid – banaadirsom